အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်စာကြည့်တိုက်ဖွင့်လှစ် RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်စာကြည့်တိုက်ဖွင့်လှစ်
12 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, အထွေထွေ, လေဆိပ်, လမ်းမကြီး, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ် terminal ကိုဖွင့်လှစ်
အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်စာကြည့်တိုက်ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် ၀ န်ကြီး Er ၀ န်ကြီးသည်စာကြည့်တိုက်မှကွယ်လွန်သွားသောပါမောက္ခထံမှပထမဆုံးစာအုပ်ရရှိခဲ့သည်။ ဒေါက်တာ A. Haluk Dursun ၏ Yolculuk ခရီးစဉ်သည် Ottoman Geography eser သို့သူ၏အလုပ်နှင့်အတူ Antalya သို့ပျံသန်းခဲ့သည်။
ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ၀ န်ကြီး Mehmet Nuri Ersoy: uz စာကြည့်တိုက်အသစ်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်။ သင်ဒီမှာထားခဲ့ပါသို့မဟုတ်သင်သည်သင်၏အနားမှာဒီနေရာကို get စာအုပ်၏အဆုံးမည်သည့်စာကြည့်တိုက်မှကယ်နှုတ်ရနိုင်ပြီးနောက်တူရကီ၌သင်တို့၏မြို့မှာရှိတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်နိုင်တယ်။ "
ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ခရီးသွားလာရေး ၀ န်ကြီး Mehmet Nuri Ersoy သည် Istanbul Airport Domestic Terminal တွင်အသုံးချသည့် Istanbul Airport Library ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
စာကြည့်တိုက်ဖွင့်လှစ်ဖဲကြိုးအား Ahmet Önalနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်၊ IGA လေဆိပ်စီမံခန့်ခွဲမှု၏အထွေထွေမန်နေဂျာတို့နှင့်အတူ ၀ န်ကြီးဌာန ၀ န်ကြီး Ersoy သည်စာကြည့်တိုက်သို့သွားရောက်ခဲ့သည်။
စာကြည့်တိုက်မှပထမဆုံးစာအုပ်ရရှိသော Ersoy သည်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ခရီးသွားလာရေး ၀ န်ကြီးဌာနဖြစ်သော Antalya ရှိမည်သည့်စာကြည့်တိုက်ကိုမဆိုပေးပို့ရန်ဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာ A. Haluk Dursun ၏ Yolculuk ခရီးစဉ်သည် Ottoman Geography eser သို့သူ၏အလုပ်နှင့်အတူ Antalya သို့ပျံသန်းခဲ့သည်။
စာကြည့်တိုက်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ၀ န်ကြီးဌာန ၀ န်ကြီးမှပြောကြားရာ၌ Istanbul လေဆိပ်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ လေကြောင်းပျံသန်းမှုလျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကာလကို Istanbul သို့ရောက်ရှိမည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ခရီးသွားလာရေး ၀ န်ကြီး Mehmet Nuri Ersoy ကလေဆိပ်ကိုတည်ဆောက်ရန်အလွန်တိုတောင်းသောအချိန်ကာလနှင့်သတ်မှတ်ထားသည့်နေ့ရက်များတွင်ထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ “ အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဟာကမ္ဘာအရှိဆုံးနေရာများသို့တိုက်ရိုက်ပျံသန်းတဲ့လေဆိပ်ရှိခဲ့တယ်၊ လေဆိပ်အရမ်းကောင်းတယ် တကယ်တော့ဒါဟာလူနေအိမ်တစ်မြို့ပါ။ လူ ဦး ရေလည်းအလွန်လူစည်ကားဖြစ်ပါတယ်။ လူသန်းပေါင်းများစွာတူရကီကနေဒီလေဆိပ်ဝင်ပေါက်နှင့်ထွက်ပေါက်လုပ်နေတာ။ သန်းနဲ့ချီတဲ့လူတွေဒီကိုလာပြီးကမ္ဘာပေါ်ရှိအခြားမြို့တစ်မြို့ကိုဒီလေဆိပ်ထဲထပ်မဝင်ဘဲသွားကြတယ်။ ”
ဤရွေ့ကားဝိသေသလက္ခဏာများ, IGA အမှုဆောင်အရာရှိရှေ့တော်၌ထိုလေဆိပ်ရဲ့အဖွင့် 1 နှစ်ပေါင်းအကောင့်သို့ယူပြီးသူတို့တူရကီများအတွက်တန်ဖိုးကိုသောအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအကဲဖြတ်ရန်အိပ်မက်မက်အများအပြားစီမံကိန်းများဒီဇိုင်း, ဝန်ကြီး Ersoy သူတို့ဘဝ၌သူတို့ကိုပြောပါတယ်အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။
, အစ္စတန်ဘူလ်မှလာမယ့်ပြီးတော့သူတို့ကအခြားမြို့ဝန်ကြီးများ Ersoy, လေဆိပ်ရဲ့အခမဲ့, ပင်လယ်, သဲထဲမှာတူရကီ၏သဘာဝနှင့်ယဉ်ကျေးမှုစည်းစိမ်ဥစ္စာ, နေရောင်ဆက်လက်ခရီးသည်မှတူရကီမိတ်ဆက်ပေးနိုင်အောင်ရည်ရွယ်ထားကြောင်းဖော်ပြထားသည်, သူတို့အပျက်အယွင်းတစ်ခုအထူးကြပ်မတ်မိတ်ဆက်စကားစတင်ပါပြီဟုပြောသည်။
ဝန်ကြီး Ersoy ကဆက်လက်ပြောကြားသည် -“ ဒါဟာအများကြီးအကျိုးသက်ရောက်တယ်။ ပြည်တွင်းရေးပင်ပထမဦးဆုံးလေယာဉ်ကွင်းမှာမိမိအချိန်ကိုဖတ်ရှုအကဲဖြတ်ရန်ချင်တော်မူသောငါတို့၏ခရီးသည်တန်ဖိုးပေါင်းထည့်နိုင်ရန်အတွက်တူရကီအကောင်အထည်ဖော်, ခုနစျပါးကိုဖတ်ပါ။ စာကြည့်တိုက်အသစ်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ဆက်လုပ်သည်။ သင်သည်သင်၏အနားမှာဒီနေရာကို get စာအုပ်၏အဆုံးမည်သည့်စာကြည့်တိုက်မှကယ်နှုတ်ရနိုင်ပြီးနောက်သင်ဒီမှာထားခဲ့ပါသို့မဟုတ်တူရကီ၌သင်တို့၏မြို့အတွက်တစ်ဦးစာအုပ်ဖတ်နိုင်ကြပါတယ်။ သင်၏စာအုပ်ကိုအဆုံးတိုင်အောင်ဖတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အခွင့်အလမ်းပေးပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တတိယဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုမည်။ အဆိုပါ protocol ကိုအသေးစိတ်နှင့်အတူပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကပြီးစီးခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုဖြတ်ပြီးသွားသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်သန့်စင်ပြီးသောareaရိယာတွင်စတုရန်းမီတာထောင်ချီသည့်ပြတိုက်တစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတင်ဒါတင်ဒါနှင့် 2020 ရာသီတစ်လအတွင်းတွင်ဤအရာကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ အထူးသဖြင့်, တူရကီထံသို့လာသောသူသည်ခရီးသည်ဝင်ခြင်းမရှိဘဲကျနော်တို့အဲဒီမှာအနိုင်ရထင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်6တိုင်းတစ်လလျှင်တစ်ကြိမ်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် Anatolia ၏တန်ဖိုးအားလုံးကိုထင်ဟပ်စေသောအယူအဆတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒီအစည်းအဝေးတွေမှာစဉ့်ကလျားဖြစ်စဉ်တစ်ခုအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့စတုတ္ထမြောက်စီမံကိန်းကိုလည်းတီထွင်ခဲ့တယ်။ သမိုင်းဝင်ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်သောလေဆိပ်မှာ kiosk နှင့်အတူတခြားနေရာတွေမှာ display ကိစ္စတွင်, အစက်အပြောက်သို့တူရကီဆောင်ခဲ့ဦးမည်။ အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံခြားဧည့်သည်များယခုအချိန်တွင်သည်အထိသူ၏နောက်ကျောတူရကီရဲ့သမိုင်းဆိုင်ရာအထိမ်းအမှတထွက်တိုးမြှင်, ယဉ်ကျေးမှု, ရှေးဟောင်းသုတေသနအနေနဲ့လေဆိပ်နှင့် ပတ်သက်. အသိပေးနှင့်အတူ၌ကျင်လည်ပါလိမ့်မယ်။ "
၀ န်ကြီး Ersoy မှ Istanbul နည်းပညာတက္ကသိုလ်ဌာနလက်ထောက်မှစာကြည့်တိုက်သို့ Fuat Sezgin စာအုပ်မှကမ္ဘာ့ပထမဆုံးသိပ္ပံသမိုင်းတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်စာအုပ်ကိုတင်ပြခဲ့သည်။ ဒေါက်တာ သူသည် Hatice Ayataçနှင့် Murat Ayataçတို့အားပြားတစ်ခုပေးခဲ့သည်။
ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ၀ န်ကြီး Mehmet Nuri Ersoy၊ Van၊ Ercis ခရိုင်မှယာဉ်တိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးသွားသောသေဆုံးသွားသောယဉ်ကျေးမှုနှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ၀ န်ကြီးဌာနမှ ၀ န်ထမ်းများ၊ ဒေါက်တာ စာကြည့်တိုက်ရှိ Ahmet Haluk Dursun ၏စာအုပ်များကိုလည်းသူလေ့လာခဲ့သည်။
2 ထောင်ပေါင်းများစွာ 550 စာကြည့်တိုက်အတွက်အပိုငျးအ
ခရီးသည်များအချိန်ဖြုန်းနိုင်သည့်ယဉ်ကျေးမှုအနားယူရာနေရာဖြစ်သည့်စာကြည့်တိုက်တွင် 350 စာစောင်ပေါင်းတစ်ထောင်၊ 500 စာပေ၊ 150 ကလေးများ၊ 50 အင်္ဂလိပ်၊ 500 မဂ္ဂဇင်းများနှင့်2နိုဗယ်ဆုရစာပေများပါ ၀ င်သည်။
ပြည်တွင်းဆိပ်ကမ်းရှိစာကြည့်တိုက်မှဝန်ဆောင်မှုများကိုလက်ခံရရှိသောခရီးသည်များသည်ပြည်တွင်းလေကြောင်းခရီးစဉ်များတွင်အသင်းဝင်ပျံသန်းမှုဆိုင်ရာစာအုပ်များငှားနိုင်သည်။ အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏စာအုပ်တွေငှားနိုငျသညျ, အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်ရောက်ရှိခရီးသည်များမှာစာအုပ်ပြန်လာ box ကိုတူရကီနိုင်ငံကိုမဆိုဌာနသို့မဟုတ်အများပြည်သူစာကြည့်တိုက်မှကယ်တင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ခရီးသွားလာရေး ၀ န်ကြီးဌာနနှင့် IGA တို့ ပူးပေါင်း၍ စာကြည့်တိုက်ကို 06.30-23.30 နာရီအတွင်းဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်သည်။6၀ န်ကြီးဌာန ၀ န်ထမ်းများကို IGA နေရာနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံများထောက်ပံ့ပေးသည့်စာကြည့်တိုက်တွင်တာ ၀ န်ပေးခဲ့သည်။
Efeler က Black ရထားနှင့်မီးရထား Park ကစာကြည့်တိုက်ဖွင့်လှစ်ဝန်ဆောင်မှုအတွက် 22 / 02 / 2019 Kara Train Park နှင့် Train Library တို့ကိုAydın၌ပထမဆုံးဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး Efeler မြူနီစီပယ်ဖြင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ Efeler မြူနီစီပယ်ဖြင့် Cumhuriyet ရထားဘူတာသည်Atatürk Boulevard Kara တွင်တည်ရှိသည်
Kayseri Bandol Ray-Book Library ဖွင့်ပွဲ (ဗီဒီယို-ဓာတ်ပုံပြခန်း) 13 / 10 / 2013 Kayseri ရှိ Band စာအုပ်ဖြင့် Ray-Book စာကြည့်တိုက်ဖွင့်လှစ်ခြင်း - Kayseri မြို့တော်စည်ပင်သာယာဌာန၏မီးရထားလမ်းမှတ်တိုင်ရှိ Ray-Book စာကြည့်တိုက်ကိုအခမ်းအနားဖြင့်အခမ်းအနားဖြင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ Kayseri Metropolitan မြူနီစီပယ်ပြည်နယ်ရှိမီးရထားလမ်းမှတ်တိုင်ရှိ Ray-Book စာကြည့်တိုက်ကိုတီးဝိုင်းအခမ်းအနားဖြင့်ကျင်းပခဲ့သည်။
ရထားစည်ပင်သာယာစာကြည့်တိုက်ကော် sniffer ကိုများအတွက်နေရာဖြစ်ခဲ့သည် 18 / 01 / 2016 မြူနီစီပယ်၏ရထားစာကြည့်တိုက်သည်ပါးလွှာသောသူများအတွက်နေရာတစ်ခုဖြစ်လာသည် -2ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာဖွင့်လှစ်ရန်ကလေးများစာဖတ်သည့်အလေ့အကျင့်ပေးစေရန်အတွက်Çankırıမြူနီစီပယ်သည်စာကြည့်တိုက်တစ်ခုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ Cankiri ၏မြို့တော်ဝန် Irfan Dinc '
တူရကီ၏ပထမဦးဆုံးစာကြည့်တိုက်ဘူတာ Konya အတွက်ဖွင့်လှစ်! 01 / 05 / 2019 ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ခရီးသွားလာရေး ၀ န်ကြီးဌာနသည် Gar House ကို Konya ရှိစာကြည့်တိုက်တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ဘူတာရုံ၏တရားဝင်ဖွင့်လှစ်တူရကီစာကြည့်တိုက်ကိုဖြတ်ပြီးတိုးချဲ့ခံရဖို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးနောက်။ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ခရီးသွားလာရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှရထားခရီးစဉ်ကိုနှစ်သက်သူများအတွက်အသစ်တစ်ခု။
အစ္စတန်ဘူလ်-Gayrettepe Metro လေဆိပ်လိုင်း 2019 အတွက်ဖြန့်ချိလိမ့်မည် 01 / 11 / 2018 အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ် -Gayrettepe မက်ထရိုလိုင်းသည်အပြည့်အဝမြန်သည်။ မက်ထရိုလိုင်း၏ပထမအဆင့်ကို 2019 တွင်ဖွင့်ပြီးဒုတိယအဆင့်ကို 2021 တွင်ဖွင့်လိမ့်မည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်နိုင်ငံသားများအဆင်ပြေစေရန်နှင့်အဆင်ပြေစေမည့်စီမံကိန်းများအနက်
Efeler က Black ရထားနှင့်မီးရထား Park ကစာကြည့်တိုက်ဖွင့်လှစ်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်
Kayseri Bandol Ray-Book Library ဖွင့်ပွဲ (ဗီဒီယို-ဓာတ်ပုံပြခန်း)
ရထားစည်ပင်သာယာစာကြည့်တိုက်ကော် sniffer ကိုများအတွက်နေရာဖြစ်ခဲ့သည်
တူရကီ၏ပထမဦးဆုံးစာကြည့်တိုက်ဘူတာ Konya အတွက်ဖွင့်လှစ်!
Geçeပေးခရီးသည်များအစ္စတန်ဘူလ် Ataturk လေဆိပ်အတွက်လေဆိပ်အရေအတွက်
3 ။ လေဆိပ်ဖေဖော်ဝါရီလ 26 2018 အပေါ်ဝန်ဆောင်မှုသို့ဝနေသည်